> Resource > Free > Top 5 Free Photo Recovery Software
Qaar badan oo naga mid ah ayaa ka careysan oo ku saabsan badiyay sawiro qaali ah ka camera digital, telefoonka gacanta, drive computer adag, iwm Marka soo food noocan oo kale ah ee musiibada, dadka intooda badan ku qaban doonaa hab dhaqanka ah ee fudud oo isku dayaya in ay raadiyaan xal ee internet-ka si aad u soo ceshaan sawiro. Haa, xal u noqon lahaa barnaamij soo kabashada sawir lagu kalsoonaan karo. Nasiib darro inta badan barnaamijyada soo kabashada sawir ee internet-ka u baahan in la siiyo iyo mar walba waa adag tahay in aad ogaato haddii aad lacag mudan tahay bixinta ama ma hor intaadan go'aansan inaad si ay u soo iibsadaan.
Nasiib wanaag, waxaa tahay weli qaar ka mid ah barnaamijyada soo kabashada sawir oo labadooduba waxtar leh oo gebi ahaanba bilaash ah. Halkan waxaan doonayaa inaan ku talinaynaa qaar ka mid ah barnaamijyada soo kabashada sawir oo lacag la'aan ah oo awood badan oo aad u.
Liiska barnaamijyada soo kabashada sawir oo lacag la'aan ah:
Top 3: weliyo (Zero waseeqeeyay Recovery)
Top 2: PC Isbatooraha File Recovery
Fiiro Gaar ah: Iyada oo dhammaan barnaamijyada soo kabashada Mac sawir u baahan tahay inaad bixiso dib u soo kabashada, dhammaan qalabka kabashada sawir lacag la'aan ah liiska ku salaysan yihiin Windows OS.
Mar kasta oo aad isku dayaan in ay Google barnaamijka sawir oo lacag la'aan ah ama barnaamij soo kabashada xogta lacag la'aan ah internet-ka, Recuva had iyo jeer waa soo jeedinta sare ka users kale sababta oo ah interface si sahlan loo isticmaalo.
Xawaaraha iskaanka lagu naalloon karo ee Recuva jirsado kabashada sawir aad safar gaaban laakiin haboon. Marka laga reebo ka soo kabashada sawir, waxaa soo kabanayo ku dhowaad dhammaan noocyada kala duwan ee files ka your computer, iyo sidoo kale camera digital, kaadhka xusuusta, flash drive, iwm
1 Waa barnaamij lacag la'aan ah gebi ahaanba la yaab xawaaraha iskaanka degdeg ah;
2 Recuva ayaa si gaar ah loogu soo kabsaday hawlaha sawiro, music, dokumenti, video, files Tifaftirayaasha iyo emails;
3 Waxaad ku eegaan kartaa sawiro helay ka hor soo kabsaday,
4 dalalka helin files si cad u sheegay doonaa: fiican ama unrecoverable;
5 Recuva si buuxda u la jaan qaada oo dhan versions Windows: Windows 8, Windows 7, 2008 Windows Server, Windows Vista, Windows XP iyo Windows 2003 Server.
PhotoRec waa barnaamij lacag la'aan ah soo kabashada sawir gaar ah in waddaa on Windows OS, OS X, DOS oo DOS. In qaar ka mid ah dhinacyada, PhotoRec waa ka fiican Recuva. Wixii ay interface DOS oo kale ah oo howlgal aasaasi ah, waa barnaamijka ugu wanaagsan ee sawir lacag la'aan ah xirfad isticmaala computer. Ma laga yaabaa in si sahlan loo isticmaalo computer badan owners.PhotoRec waa barnaamij lacag la'aan ah soo kabashada sawir gaar ah in waddaa on Windows OS, OS X, DOS oo DOS. In qaar ka mid ah dhinacyada, PhotoRec waa ka fiican Recuva. Wixii ay interface DOS oo kale ah oo howlgal aasaasi ah, waa barnaamijka ugu wanaagsan ee sawir lacag la'aan ah xirfad isticmaala computer. Ma laga yaabaa in si sahlan loo isticmaalo in milkiilayaasha badan computer.
1 Marka loo eego barnaamijyada soo kabashada sawir kale, PhotoRec shaqeeyaa wanaagsan OS ugu badan ee suuqa, Windows OS, OS X, DOS oo DOS;
2 Waxa ay taageertaa dib u soo kabashada ee in ka badan 20 nooc oo file;
3 Waa awoodaan inay ka bogsadaan xijaab tirtiray. Ku dhawaad ​​ma barnaamijka lacag la'aan ah soo kabashada sawir uu leeyahay funtion this.
Dhab ahaantii, weliyo waa barnaamij bixisay. Version xorta ah ee weliyo kuu ogolaanayaa oo kaliya in aad ka bogsato sawiro. Laakiin sawir function ka soo kabashada free of weliyo waa mid ka mid ah xulashada ugu fiican ee aad u. Waxa uu baaritaanku qoto dheer in barnaamijyada soo kabashada xogta ugu badan. Si kastaba ha ahaatee, sababta oo ah baaritaan qoto dheer, waxa ay qaadataa waqti dheer baar wakhtigaas barnaamijyada kale ee sawirka free soo kabashada oo liiska ku jirta. Oo waa inaad xitaa ma hakan karo inta lagu jiro iskaanka ah. Tan macnaheedu waa, haddii qalab aad kharribmay ama aan laga garan karaa computer, weliyo waa fursad ka wanaagsan yahay barnaamijyada kale.
1 Waxaa aqoonsan drives ka badan barnaamijyada kale, arrinta ma qalab la kharribeen ama aan laga garan karaa computer;
2 Waxaa uu baaritaanku drive ka qoto dheer in barnaamijyada kale samayn;
3 Waxay bixisaa sida diirada badan kartoo in "qaabeynta Advanced";
4 Waxaad badbaadin karo natiijada iskaanka soo-celinta ka dib, halka barnaamijyada soo kabashada sawir lacag la'aan ah badankoodu ma laha hawsha.
Hel weliyo (Zero waseeqeeyay Recovery)
Top 2: Recovery Isbatooraha File PC
PC waa Isbatooraha barnaamijyada kale sawir sahlan oo lacag la'aan ah soo kabashada. Waxa uu baaritaanku iyo kabanayso aad disk meesha photos ayaa si fudud la tirtiray si deg deg ah. Waxaa la abuuray dadka isticmaala oo aqoon yar oo farsamo, sababta oo ah waxaad u baahan tahay in la ogaado farqiga u dhexeeya drive macquul ah oo jirka si ay u bilaabaan. In kastoo engine iskaanka ee PC Isbatooraha waa xoog badan yahay, waxay qaadataa dhowr daqiiqo si ay baarista drive waana ma awoodaan in ay iskaan drive ah u kharribmay.
1 Waxaa soo kabanayo photos tirtiray labada macquul ah oo jirka drives;
2 Waxa soo kabanayo photos xataa marka laga soo galo madax ah ma aha heli karo;
3 Waxa uu ogaado oo uu baaritaanku qoruhu si toos ah xitaa marka qaybta kabaha ama baruur ayaa loo tirtiro ama dhaawac;
4 Waxay kaa caawinaysaa in aad soo kabanayo files waqti asalka iyo taariikhda stamp
Hel Recovery File PC Isbatooraha
PicaJet Photo Recovery lacag la'aan ah ka caawisaa in aad ka bogsato tirtiray ama sawiro digital ka kaararka warbaahinta ama ulaha ay isticmaalaan aad camera digital, iyo sidoo kale ka drive computer adag formatted. Maxaa ka dhigay waxa ay si gaar ah waa in haddii aad rabto in aad soo kabsado photos lumay ka camera digital, waxaad u baahan tahay in la hubiyo in kaarka ama ul waa in camera si ay barnaamijka waxa lagu ogaan karaa.
1 interface ee barnaamijka waa dhib badan, laakiin haddii aad doonaysid in aad isku daydid wax cusub, PicaJet Photo Recovery Free noqon doontaa waxa aad rabto;
2 Marka la barbar dhigo barnaamijka kale ee soo kabashada Photo, PicaJet Photo Recovery Free badan yahay sida maamulka sawir digital iyo software database image.
Qaadato PicaJet Photo Recovery Free
Haddii aadan ku computer user xirfad leh oo aad rabto in aad soo kabanayo sawirkaaga si deg deg ah, Recuva waa ikhtiyaarkaaga ugu fiican.
Wixii kuwa doonaya inuu ka soo kabsado sawir ah oo ku saabsan qalab waddaa OS X, Linux ama xataa DOS, PhotoRec waa run ahaantii waxtar leh. Waxaad sidoo kale u baahan doonaa in la ogaado in yar oo ah howlgal aasaasi ah DOS.
Haddii aad sawiro ayaa laga badiyay ka drive qaldan, waxaan u soo jeedin doonaa in aad eegno weliyo. In kastoo iskaanka barnaamijka tani ma aha si dhakhso ah, waxa ay ugu dambeyntii lagu ogaan doonaa in aad sawiro lumay oo soo kabsado iyaga oo aad u.
PC Isbatooraha iyo PicaJet sidoo kale waa mid ikhtiyaari ah haddii aad rabto in aad soo kabsado sawiro ka drive macquul ah ama aad rabto in ay leeyihiin isku dayga dheeraad ah.
Photo Recovery U iPhone ama Android Phone
Haddii aad sawiro ayaa laga badiyay ka qalab macruufka ah sida iPhone iyo iPad ama aalad Android, ugu barnaamijka sawir suuqa uu noqon doono ciirsi. Laakiin ha walwalin, Wondershare idin tusin xal fiican ee soo kabashada sawir iPhone iyo sidoo kale dib u soo kabashada sawir Android.
Wondershare Dr.fone ee macruufka (iPhone Data Recovery waa codsi soo kabashada cajiib ah xogta iPhone oo awood aad ka bogsato lumay photos, videos, SMS, xiriirada iyo noocyo badan oo file kale ka qalab iPhone iyo gurmad Lugood on your computer labadaba. Waxaa hubaal ah hoggaamineed ee barnaamijka xogta iPhone suuqa in noloshayada waad badbaadisay users badan 'oo lagu amaanay heer sare iyaga by.
Wondershare Dr.Fone for Android (Kabashada xogta Android) waa codsi soo kabashada cajiib ah xogta iPhone oo awood aad ka bogsato photos lumay, videos, SMS, xiriirada iyo noocyo badan oo file kale labada qalab iPhone iyo gurmad Lugood on your computer. Waxaa hubaal ah barnaamijka xogta iPhone keentay in suuqa in noloshayada waad badbaadisay users badan 'oo lagu amaanay heer sare iyaga by.